Iindaba -Itekhnoloji eziphambili kunye nethemba lokuphuhliswa kwenkqubo yokugcina amandla ebhetri
Iindaba Zokugcina Amandla Olondolozo lwe-Polaris: I-forum ye-Intanethi yamandla e-Urban Energy Development (Beijing) kunye ne-Seminar ye-Intanethi ye-Intanethi yokwakhiwa kunye neNtsebenziswano yabanjwa nge-1 kaDisemba ngo-2017 eBeijing. Emva kwemini yeforam yezobuchwepheshe, uJiang Jiuchun, umlawuli we-National Energy Active Distribution Network Technology R&D Center, wanikela intetho ngomxholo: ubuchwepheshe obuphambili beenkqubo zamandla ebhetri yeLithium.
Jiang Jiuchun, UMlawuli weZiko leSizwe leSizwe lokuSebenzisa ukuhanjiswa kweNetwork:
Ndithetha ngokugcinwa kwebhetri. IYunivesithi yaseJiaotong ibisenza ugcino lwamandla, ukusuka kwiinkqubo zamandla kunye nezithuthi zombane ukuya kwisithuthi. Namhlanje sithetha ngezinye izinto esizenzayo ekusebenzeni kwenkqubo yamandla.
Izikhokelo zethu zophando eziphambili: enye yigridi-grid kwaye enye isebenzisa ibhetri. Kwisicelo sebhetri, iimoto zombane zokuqala esazisebenzisa sisebenzisa ukugcinwa kwamandla kwenkqubo yamandla.
Ngokumalunga nomcimbi obalulekileyo wokugcina amandla ebhetri, umba wokuqala kukhuseleko; okwesibini kukuphila ixesha elide, kwaye ke ukusebenza ngempumelelo okuphezulu.
Kwiinkqubo zokugcina amandla, into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele ngokhuseleko, emva koko ukusebenza kakuhle. Ukubambelela ekusebenzeni ngokukuko, umndilili weenguqu, kunye nobomi, kunye nokusetyenziswa kwamandla emva kokuhla kwebhetri, isenokungabi yingxaki emiselweyo kwiimeko ezininzi. Izikhombisi ukuyichaza, kodwa kufuneka ibaluleke kakhulu yogcino lwamandla. Siyathemba ukuba ngezinto ezininzi, singayisombulula ingxaki yempilo ekhuselekileyo kunye nokusebenza okuphezulu. Inkqubo yokugcina amandla afanayo kunye nenkqubo yokuhlaziywa kwamakhadi ngemeko yebhetri isetyenziswa kwizithuthi zombane kunye neenkqubo zothutho lukawonkewonke.
Okwangoku, ukusetyenziswa kwenkqubo yogcino lwamandla, abalawuli beendlela, kunye neebhokisi zokuhambisa ezisisilumko ezisetyenziswa ngumntu wonke, ukuphucula uqoqosho ngokubanzi kunye nokuzinza kwenkqubo, ukuphucula ixabiso eliphambili labahlanganisi benkqubo, kwaye nokuba nako ukufikelela kubuhlobo kwilifu lokuphela elingasemva iqonga.
Le yinkqubo yeeshedyuli yamandla ephakathi. Olu lwakhiwo lwe-hierarchical lwenziwe lwacaca kakhulu ngale ntsasa, kwaye singafezekisa ishedyuli efanelekileyo yexesha elide yokulungelelaniswa kwezityalo zokugcina amandla ombane kunye nee-Microphids ngokusebenzisa abalawuli beendlela ezininzi.
Ngoku yenziwa kwikharikhtha esemgangathweni yokuhambisa amandla. Eli licandelo elisisiseko lekhabhathi yokuhanjiswa kwamandla. Inemisebenzi eyahlukeneyo, njengokutshaja kunye nokukhupha imisebenzi, ukukhusela okuzenzekelayo kunye nemisebenzi yefayile. Esi sisixhobo esisemgangathweni.
Isilawuli se-node sisebenzisa izixhobo zolawulo lwasekhaya zezixhobo eziphambili, imisebenzi yokuqokelela idatha, ukubeka iliso, ukugcinwa, izicwangciso zokulawulwa kokusebenza kunye nokulayisha. Kukho ingxaki apha efuna uphando olunzulu kunye nzulu kumgangatho wokuvavanywa kwedatha kunye nexesha leesampulu zedatha xa idatha ifakiwe. Ngale ndlela, uhlalutyo lwedatha yebhetri ngasemva kwebhetri luphunyezwa, kwaye ukugcinwa kwebhetri kuguqulwe kulondolozo lobulumko. Yenza umsebenzi, ekugqibeleni, ukuba likhulu kangakanani inani leesampuli, okanye likhawuleza kangakanani ukugcina, ukuchaza ngokupheleleyo imeko yangoku yebhetri.
Ukuba ndiqhuba imoto yombane, uya kufumanisa ukuba uninzi lweemoto zombane zikwimeko ezihlala zitshintsha kwaye ziyaxhuma. Ngapha koko, ukugcinwa kwamandla kujongene nengxaki efanayo kwizicelo zamandla okugcina amandla. Sinethemba lokuyisombulula ngokusebenzisa idatha. Sinesampulu yesampulu yeBMS efanelekileyo.
Makhe ndithethe malunga nokugcinwa kwamandla okuguqukayo. Wonke umntu uthi ndingayenza amaxesha angama-6,000, kwaye ingasetyenziswa amaxesha aliwaka emotweni. Kunzima ukuxela. Ungayinceda njengenkqubo yogcino lwamandla, ebanga amaxesha angama-5,000. Lingakanani ixabiso lokusetyenziswa, kuba ibhetri ngokwayo inengxaki enkulu, ukwehla kwebhetri kuhleliwe ngexesha lenkqubo yokudodobala, ibhetri nganye yehla ngendlela eyahlukileyo, kwaye umahluko phakathi kweeseli ezizodwa uya usiba ngokwahlukileyo ukungalingani kwemveliso yomenzi. ukwehla kwebhetri kwahlukile. Lingakanani amandla eli qela leebhetri elisebenzisa amandla kunye namandla afumaneka? Le yingxaki efuna uhlalutyo ngononophelo. Umzekelo, xa izithuthi zombane zisetyenziswa ngoku, zisetyenziswa ukusuka kwi-10 ukuya kwi-90%, kwaye ukuhla kwamandla emali kunokusebenzisa kuphela i-60% ukuya kuma-70% ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, okubeka umngeni omkhulu kugcino lwamandla.
Ngaba singasebenzisa amaqela ngokuhambelana nomthetho wokubola ukwenza ucalucalulo, lukhulu kangakanani ukhetho olululo lokufumana ukusebenza okungcono kunye nokusebenza ngokukuko, sinethemba lokulihlela ngokwasemthethweni ukubola kwebhetri, amasebe angama-20 njengendawo engeyiyo ilunge ngakumbi okanye i-40 ifanelekile ngakumbi, eyenza ulungelelwaniso phakathi kokusebenza kakuhle kunye nombane wombane. Ke into esiyenzayo malunga nokugcinwa kwamandla okuguquguqukayo, okwayiprojekthi yethu yokwenza le nto. Ewe kunjalo, kukho indawo ebhetele onokuyisebenzisa kwiikhasethi. Ndicinga ukuba ukusetyenziswa kwecascade kunexabiso elithile kule minyaka mibini idlulileyo, kodwa kufanelekile ukulisebenzisa kwixa elizayo, kodwa kwakhona cinga ngokusebenza kokutshaja kunye nokukhupha, kanye xa ixabiso leebhetri liyehla, Kukho iingxaki zokucofa. Iqela eliguquguqukayo linokusombulula iingxaki ezinkulu. Olunye uhlobo lokumodareyitha okuphezulu kunciphisa iindleko zenkqubo iphela. Esona sikhulu sinokuphucula umgangatho wokusetyenziswa.
Njengebhetri esetyenziswa emotweni kwiminyaka emithathu kamva, ukwehla kungaphantsi kwe-8%, kwaye izinga lokusebenzisa liphela yi-60%. Kungenxa yomehluko wayo. Ukuba wenza iiseti ezi-5 zokusetyenziswa kwenqanaba, unokufezekisa i-70%, enokuphucula izinga lokusetyenziswa. Ukuqinisa imodyuli zebhetri kunye kunokuphucula ukusetyenziswa kwebhetri. Emva kokugcinwa, ukugcinwa kwamandla kukhuphuke ngama-33%.
Ukujonga lo mzekelo, emva kokulinganisa, ungonyuswa nge-7%, emva kokuhlelwa ngokuguqukayo, ndonyuke nge-3.5%, kwaye ukulinganisa kungenyuka nge-7%. Ukwahlula-hlula ngokweqela kunokuzisa izibonelelo. Ngapha koko, isizathu sokwehla kweebhetri zabavelisi ezahlukeneyo. Kuyimfuneko ukwazi kwangaphambili ukuba eli qela leebhetri liza kuba yintoni okanye ukuba yeyiphi iparameter yokuhanjiswa, kwaye ke uya kwenza u-optimization ojolise kuwo.
Esi sisikimu esamkelweyo, imodyuli yamandla apheleleyo azimeleyo kulawulo lwangoku, engalungelanga izicelo zamandla aphezulu.
Inxalenye yamandla emodyuli ilawulwa ngokuzimeleyo yile yangoku. Le setyhula ilungele umbane ophakathi kunye nophakamileyo kunye nokusetyenziswa okuphindiweyo. Esi sisisombululo sokugcina amandla ebhetri iMMC esilungele umbane omninzi kunye namandla aphezulu.
Malunga nokuhlaziywa kobume bebhetri. Ndihlala ndatsho ukuba ubungakanani bebhetri bungahambelani, ukwehla kungakhethi, ukuguga kwebhetri akuhambelani, kwaye amandla kunye nokumelana kwangaphakathi kuncitshiswa kakhulu. Sebenzisa le paramenti ukuphawula, kokukhona usebenzisa amandla kunye nokumelana kwangaphakathi. Ukuba ufuna ukufumana indlela yokugcina ukungqinelana, kufuneka uvavanye umahluko we-SOC yebhetri nganye, indlela yokuvavanya i-SOC yale seli inye, emva koko ungatsho ukuba le bhetri ingangqinelani nokuba angakanani amandla aphezulu . Uyifumana kanjani i-SOC eyodwa ngokugcina ibhetri ngokusebenzisa i-SOC? Indlela yangoku ukubeka i-BMS kwinkqubo yebhetri kunye nokuqikelela le-SOC kwi-intanethi ngexesha langempela. Sifuna ukuyichaza ngenye indlela. Sinethemba lokusebenzisa idatha eyimodeli ngasemva. Sihlalutya ibhetri i-SOC kunye nebhetri ngedatha yangasemva. SOH, yongeza ibhetri kwesi siseko. Ke ngoko, sinethemba lokuba idatha yebhetri yemoto, hayi idatha enkulu, liqonga ledatha. Ngokufunda ngomatshini kunye nokumbiwa kwemigodi, imodeli yoqikelelo lwe-SOH yandiswa, kwaye isicwangciso sokulawula ukuhlawula ngokupheleleyo kunye nokukhutshwa kwenkqubo yebhetri kunikezelwa ngokusisiseko kwiziphumo zoqikelelo.
Emva kokuba idatha inyukile, kukho enye inzuzo, ndingenza isilumkiso kwangoko ngemeko yebhetri. Imililo yebhetri isenzeka rhoqo, kwaye inkqubo yokugcina amandla kufuneka ikhuseleke. Sinethemba lokwenza ulwazi lwexesha lokwenyani kunye nesilumkiso kwangethuba kunye nexesha elide malunga nokuhlaziywa kwedatha yangasemva, ukufumana iindlela zesilumkiso zexesha elifutshane kunye nexesha elide malunga neengozi zokhuseleko ezinokubakho, kwaye ekugqibeleni siphucule ukhuseleko kunye nokuthembeka kwenkqubo iphela.
Ngale nto, ndinokufezekisa imiba eliqela ngesixa esikhulu, enye kukonyusa izinga lokusetyenziswa kwenkqubo, okwesibini kukwandisa ubomi bebhetri, kwaye okwesithathu kukuqinisekisa ukhuseleko, kwaye le nkqubo yokugcina amandla inokusebenza ngokuthembekileyo. .
Ndidinga idatha engakanani ekufuneka ndiyilungiselele ukufezekisa iimfuno zam? Ndidinga ukufumana ibhetri encinci ehlangabezana nesimo sebhetri. Ezi datha zinokuxhasa uhlalutyo lwasemva, idatha ayinakuba mkhulu kakhulu, isixa esikhulu sedatha sikhulu kakhulu kunenethiwekhi wonke umthwalo. Amakhulu e-millisecond, uthatha i-voltage kunye neyangoku yebhetri nganye, engakwaziyo ukuyidlulisa ngasemva. Sifumene indlela ngoku, singakuxelela, ukuba yeyiphi isampulu yokubonisa isampulu, yeyiphi idatha ekufuneka uyidlulisile Simane sicinezela le datha, kwaye siyigqithise kwinethiwekhi. Ipharitha yebhetri ejikeleze ibhafu yimali enye, leyo yanele ukufezekisa iimfuno zovavanyo lwebhetri. Iirekhodi zethu zedatha zimbalwa kakhulu.
Eyokugqibela, sithi iBMS, iindleko zokugcina amandla zibaluleke ngakumbi kuneendleko zeebhetri. Ukuba wongeza yonke imisebenzi kwi-BMS, awukwazi ukunciphisa iindleko zale BMS. Kuba idatha ingathunyelwa, kunokuba khona iqonga lokuhlaziya elinamandla emva kwam. Ndingayenza lula ngaphambili. Kukho isampulu yedatha kuphela okanye ukukhuselwa okulula ngaphambili. Yenza ukubala okulula kakhulu kwe-SOC, enye idatha ithunyelwe ukusuka ngasemva, yile nto siyenzayo ngoku, uqikelelo lukarhulumente lonke kunye nesampuli ye-BMS engezantsi, sidlulisa isilawuli sendlela yokugcina amandla, kwaye ekugqibeleni sidlulele kwenethiwekhi, amandla ugcino umlawuli we-node uya kuba ne-algorithm ethile, oku kulandelayo ngokusisiseko kukuchongwa kunye nokulingana. Ubalo lokugqibela lwenziwa kwinethiwekhi yangasemva. Le yiyo yonke inkqubo yoyilo.
Makhe siqwalasele ukusebenza kunye nokulula kokutshintsha okungaphantsi komaleko, okukulingana, ukufunyanwa kombane osezantsi kunye nokufunyanwa kokulingana kufunyanwa ngoku. Umlawuli wokulawula i-node yokugcina izinto uxela oku kulandelayo ngendlela yokujongana nayo, kubandakanya ne-SOC eyenziwa apha, kwaye umva usebenza kwakhona. Le sensor enobuhlakani, iyunithi yolawulo lwebhetri, kunye nokulawulwa kweengcingo ezikrelekrele esele sisebenza kuzo, ezinciphisa kakhulu iindleko zokugcina amandla.
I-3.6v ibhetri yeLithium-Ion, Ipakethi yebhetri yamandla, I-20ah iLithium Ion ibhetri, Ipakethi yeBhetri yeLithium, Iiseli zebhetri zeLithium Ion, Ibhetri yamandla eLithium,